देउवा र प्रचण्डलाई ओलीको प्रश्न–एमसिसी के गर्ने ? झुक्याएर पास गर्ने ? – kalikadainik.com
देउवा र प्रचण्डलाई ओलीको प्रश्न–एमसिसी के गर्ने ? झुक्याएर पास गर्ने ?
शनिबार, भाद्र १९, २०७८ | २०:५०:०९ |
काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले विगतमा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन एमसिसी सम्झौता गरेका व्यक्तिहरु नै अहिले बोल्न डराएको आरोप लगाएका छन् ।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित पार्टी कार्यकर्ता भेलामा ओलीले एमसिसीमा सत्ता गठबन्धनको धारणा मागे । ‘यिनै मान्छेहरु हुन् कांग्रेस र माओवादी भएका बेला एमसिसी गरे । अहिले एमसिसीमा बोल्दैनन् । झुक्याएर पास गर्न खोज्या छ । के गर्ने हो भन्दैनन् । जनताका अगाडि यिनीहरुले गरेको एमसीसी के गर्ने ? देउवाजी, प्रचण्डजी बोल्नुपर्दैन । के गर्ने एमसीसी ? उहाँहरु चुपचाप हुनुहुन्छ। यस्ता अनगिन्ती कुराहरु गोप्य राखेर नेपाली जनतालाई छक्याएर अघि बढ्न खोजेका छन्,’ उनले भने ।
ओलीले सुकुम्वासी आयोग खारेज र आफूले सुरु गरेका योजना रोक्ने सरकारको निर्णयको पनि आलोचना गरे । ‘पहिला गरिबमाथि बञ्चरो प्रहार गरेर सुरु ग¥यो । त्यसपछि विकास निर्माणका काम एकपछि अर्को भत्काउन थाल्यो,’ उनले भने ।